Christina Ricci sy Juliette Lewis dia tonga mpifankatia mba ho tafavoaka velona amin'ny 'Yellowjackets' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Christina Ricci sy Juliette Lewis dia tonga mpanankarena tafavoaka velona amin'ny 'Yellowjackets'
Christina Ricci sy Juliette Lewis dia tonga mpanankarena tafavoaka velona amin'ny 'Yellowjackets'
Inona no hataonao raha te ho velona ianao?
by Trey Hilburn III Aogositra 6, 2021
by Trey Hilburn III Aogositra 6, 2021 54,148 hevitra
Showtime dia manana seho izay toa manintona tokoa amin'ny lalana mitondra ny lohateny hoe, Yellowjackets. Ny andiany dia ahitana an'i Christina Ricci sy Juliette Lewis mahatalanjona. Ny teti-dratsy dia mifantoka amin'ny ekipa baolina kitra izay tsy maintsy tafavoaka velona taorian'ny fianjerana fiaramanidina nanao izay zavatra rehetra nilainy sy karazana fandehanan'i Lord of the Flies nandritra izany. Io dia mifantoka amin'izay tokony hiainan'ny sisa velona sy hanafina azy ireo mba hiaina fiainana ara-dalàna. Ny valiny dia andiam-bending genre izay fizarana mitovy amin'ny horohoro ara-psikolojika sy ny fahatanterahan'ny taona… fa miaraka amin'ny fihinana kanibalisma.
Ny tohiny ho an'ny Showtime's Yellowjackets mandeha toy izao:
Ekipa mpilalao baolina kitra zazavavy mianatra any an-tsekoly manan-talenta izay tonga soa aman-tsara tafavoaka velona tamin'ny fiaramanidina nianjera tany afovoan'i Ontario. Ity andiany ity dia hitantara ny fiavian'izy ireo avy amin'ny ekipa sarotra nefa mandroso hatrany amin'ny fianakaviana mpiady, mpihinana olona, ​​ary koa manara-maso ny fiainana nanandraman'izy ireo hiaraka hiverina 25 taona taty aoriana, manaporofo fa ny lasa dia tsy tena lasa ary izay nanomboka tao amin'ny lavitra dia lavitra ny tany efitra.
Ity andiany ity dia toa mahafinaritra ary ny teaser fohy izay azontsika roa tonta dia manome antsika ny volo izay hilalaovan'i Ricci ilay olon-dratsy ary i Lewis no mpandray anjara voalohany izay tsy maintsy niaina tamin'ny hadalàna adala nanery azy ireo hiaina.
Ny andiany koa dia ahitana an'i Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nelisse, ary Jasmin Savoy Brown. Ny fizarana piloto dia tarihin'i Karyn Kusama (Ny fanasana, mpanimba)
Ahoana ny hevitrao momba ny tranofiara Yellowjackets? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.